Myat Shu - မိသားစုတနင်္ဂနွေ
You are here : Myat Shu » Archives for မိသားစုတနင်္ဂနွေ
ရွှေရုပ်လွှာ (အိန္ဒိယ – မြန်မာ ဖက်စပ်ရုပ်ရှင်)
Published By Myat Shu On Sunday, November 20th 2011. Under မိသားစုတနင်္ဂနွေ, မျက်ရှု
httpv://youtu.be/zyTq6C5ErwA မိသားစုတနင်္ဂနွေကဏ္ဍ တင်ဆက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တာ ကြာပြီမို့ ဒီတစ်ပတ်တော့ အိန္ဒိယနဲ့ မြန်မာ ဖက်စပ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ရွှေရုပ်လွှာ (Chabbi) ကို ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေအတွက် ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီဇာတ်ကားကို ရွှေမြင်းမိုရ်ရုပ်ရှင် ကုမ္ပဏီကနေ အိန္ဒိယဒါရိုက်တာ မစ္စတာလာဟီရီကို ရိုက်ကူးစေခဲ့ပြီး မင်းသား အရစ်ရ်ှကူးမား၊ မင်းသမီး မာလာဆင်ဟာတို့နဲ့အတူ မြန်မာဘက်က မင်းသမီး ဆွေဆွေလဲ့၊ မင်းသား ညွန့်တင်တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ မေဇင်နဲ့ အဆိုတော် မယ်ဒဂုန်မြင့်တို့ကလည်း ဇာတ်ပို့အဖြစ် အားဖြည့်ပေးထားပါတယ် ၀တ္ထုဇာတ်လမ်းကတော့ ဘင်္ဂါလီစာရေးဆရာကြီး ဆာရတ် ချန္ဒရာဂျတ္တာရီရဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ မြန်မာလူမျိုး မောင်ဘသင်းနဲ့ မရွှေတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်ရှုပရိသတ်တွေ ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မျက်ရှုဝိုင်းတော်သားများ ကိုးကား။ ခေတ်ဟောင်းသတင်းစာများက ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, August 28th 2011. Under မိသားစုတနင်္ဂနွေ
httpv://youtu.be/7ZVISin29F4 httpv://youtu.be/Sh5XWRyEaN4 ဒီတပတ် မိသားစုတနင်္ဂနွေ ကဏ္ဍမှာတော့ အင်တာနက်ပေါ်ကနေ ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ ကုန်းဘောင်ခေတ် ၀တ်စားဆင်ယင် ထုံးဖွဲ့မှု ဓာတ်ပုံများကို စုစည်းတင်ပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လ်နှစ်ခုကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ မျက်ရှုစာစုအဖွဲ့ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, August 14th 2011. Under မိသားစုတနင်္ဂနွေ
httpv://youtu.be/v3JR9QSB2Xo သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့သည် နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာသည့်နေ့ (World Humanitarian Day) ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဘဂ္ဂဒက်ရှိ ကုလသမဂ္ဂရုံးအား ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံရသဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည့် Sérgio Vieira de Mello နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အဆိုပါနေ့ကို နိုင်ငံတကာ လူသားချင်း စာနာသည့်နေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လူသားချင်း စာနာကူညီမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ကိုယ်ကျိုးစွန့် ဆောင်ရွက်နေသော ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ ၀န်ထမ်းများအတွက် ထိုနေ့တွင် အခမ်းအနားများ ကျင်းပ၍ ဂုဏ်ပြုလေ့ရှိပါသည်။ ယခုနှစ် (၂၀၁၁ ခုနှစ်) သည် တတိယမြောက်အကြိမ် ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ကုလသမဂ္ဂ ... Continue Reading
၁၉၄၆ ခုနှစ် မြန်မာသင်္ကြန်
Published By Myat Shu On Sunday, August 7th 2011. Under မိသားစုတနင်္ဂနွေ
httpv://youtu.be/9N8pFinCXDE ဒီတပတ် မိသားစုတနင်္ဂနွေ အစီအစဉ်အတွက် Google မှာ ရှာလို့ရတဲ့ ခေတ်ဟောင်း သင်္ကြန်ပုံရိပ်တွေကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မူရင်းကတော့ British Pathe ရဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်ကနေ တွေ့ရတာပါ။ အဲဒီ ၀ဘ်ဆိုက်မှာ မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်းဗွီဒီယိုဖိုင်လ် တော်တော်များများ တင်ထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ မျက်ရှုစာစုအဖွဲ့ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, July 26th 2011. Under မိသားစုတနင်္ဂနွေ
httpv://youtu.be/vdOmrcM8jJM ဒီတပတ် မိသားစု တနင်္ဂနွေ အစီအစဉ်အတွက် ကမ္ဘာကျော် ဟာသ သရုပ်ဆောင် ချာလီချက်ပလင်ရဲ့ The Kid ဇာတ်ကားကို ပြန်လည် တင်ပြလိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဦးဘကလေး(ခ) ရွှေတလေးက မြန်မာမှုပြုပြီး “သားနှင့်ပါဆို လူပျို” ဆိုတဲ့ ကားကို ရွှေရိုးရုပ်ရှင် ကုမ္ပဏီရဲ့ နောက်ဆုံးဇာတ်ကားအဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, July 17th 2011. Under မိသားစုတနင်္ဂနွေ
httpv://youtu.be/N_f0FMwYOC0 ၂၀၁၀ ခုနှစ်တုန်းက မန္တလေး ၀ါဆိုခြင်းပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် ၀ါဆိုလတလလုံး ကျင်းပတဲ့ ခြင်းပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ရပ်ကသာမက ကမ္ဘာအနှံ့အပြားက ခြင်းလုံး အားကစား ခုံမင်သူတိုင်း လာရောက်ကြတဲ့ ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, July 10th 2011. Under မိသားစုတနင်္ဂနွေ, ရေဒီယိုဇာတ်လမ်း
ဘီအီးဒီအောင်သိုက် စီစဉ်သည့် ပြောဇာတ် (ရေဒီယိုဇာတ်လမ်း) `ရွှေသည်း ငွေသည်း စိန်နဲ့ခွဲ´ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သူများ ဘီအီးဒီအောင်သိုက်၊ ဆွေဇင်ထိုက်၊ ခင်ယုမေ၊ ခင်လေးဆွေ၊ ဒေါ်မေနွဲ့၊ ရဲခင်၊ ဆယ်ပြားစေ့၊ ပြည်စိုး၊ မိုးဇော် စံပယ်ဦးတေးသံသွင်းမှ ဖြန့်ချိသည်။ ... Continue Reading